SSC NAPOLI VS INTER MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
SSC NAPOLI VS INTER MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
Raage October 21, 2017
(Napoli) 21 Okt 2017 – Waxaa caawa kulanka todobaadkan ugu adag horyaalka Talyaaniga todobaadka 9-aad yeelan doona kooxaha SSC Napoli vs Inter Milan oo ku kala jira kaalinta 1-aad iyo 2-aad.
Dhanka Napoli: Insigne ayaa soo kabtay waana loo yeerey, iyadoo ay u badan tahay inuu bilowgiiba safto, iyadoo ay boos khadka dhexe ah isku hayaan Allan-Zielinski waloow uu cadcad yahay wiilka Brazilian-ka ah.
Dhanka Inter: Spalletti ayaa doonaya inuu safo isla 11-kii ku badiyay kulankii Derby Milano, waloow uu Vecino markan khadka dhexe ku wehlinayo Gagliardini iyadoo Borja Valero laga dheelsiinayo lambarka buuxa. Waxaa weli maqan Brozovic, balse waxaa loo yeerey Joao Mario, oo kulankii Milan qumanka laga hayay.
22 SEPE, 1 RAFAEL, 21 CHIRICHES, 6 MARIO RUI, 19 MAKSIMOVIC, 11 MAGGIO, 15 GIACCHERINI, 42 DIAWARA, 30 ROG, 37 OUNAS, 20 ZIELINSKI
27 PADELLI, 46 BERNI, 13 RANOCCHIA, 21 SANTON, 29 DALBERT, 7 CANCELO, 17 KARAMOH, 23 EDER, 99 PINAMONTI, 10 JOAO MARIO
AAN LA HELI KARIN
DAAWO: Pedro oo Chelsea u dhaliyay gool u tartami kara goolka Sanadka Premier League
TOOS u daawo: Hamburger SV vs Bayern Munchen - LIVE (Shaxda sugan)